श्रीमानसँग छुट्टिन चोरीको नाटक ! – साँचो खबर
श्रीमानसँग छुट्टिन चोरीको नाटक !
काठमाडौं : आफ्नो घरमा गरगहना तथा नगद चो’री भएको नाटक गर्ने महिला प’क्रा उ परेकी छन्। आइतबार साँझ साढे ६ बजेतिर प्रहरीले महालक्ष्मी नगरपालिका-१ स्थित घर भएकी कान्छी पोडेलाई प’क्रा उ गरेको हो । प्रहरीले उनी माथि चो’रीको ना’टक गरी प्रहरीलाई अनावश्यक है’रानी दिएको भन्दै प’क्रा उ गरेको हो।
कान्छी पोडे र उनका श्रीमान सानु कान्छा पोडे दुबै जना आइतबार दिउँसोसम्म महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमै थिए । प’क्रा उ परेकी कान्छीले आफ्ना श्रीमान माथि घरेलु हिं,सा गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसै विषयमा परिसरमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको प्रहरी उपरीक्षक प्रज्जवल महर्जनले बताए।
‘दिउँसोसम्म उहाँहरू दुबै जना परिसरमै हुनुहुन्थ्यो। घर फर्किएपछि आफ्नो घरमा चो’री भएको भन्ने फोन आयो,’उनले भने। दिउँसो २ बजे मौखिक जानकारी आएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त, सात दोबाटोबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा टोली खटियो । टोली घरमा पुग्दा भने ठिक चो’री भएकै जस्तो अवस्था थियो।
कान्छीले प्रहरीलाई आफ्नो करिब २६ लाख नगद, दुई तोला सुनको सिक्री, एक तोला सुनको सिक्री, दुई तोलाको हातमा लगाउने बाला, आधा तोलाको झुम्का एक जोर, पाँच तोला चाँदीको पाउजु एक जोर र २० तोलाको चाँदीको मूर्ति ह’राएको जानकारी गरा एकी थिइन्। ‘घटनास्थल ठिक चो’री भएको जस्तो देखिन्थ्यो। ढोका, दराज फोडिएको थियो,’प्रहरी उपरीक्षक महर्जनले भने,’सामानहरू पनि छरपस्ट थिए।’
प्रहरीले घर वरिपरिका स्थानीयवासीसँग पनि सोधपुछ गरेका थिए। तर कोही घर भित्र पसेको कुनै सू’राक पाएन। केही समय सोधपुछमै बितेपछि प्रहरीले कान्छी माथि नै शं’का गर्न थालेका थिए । प्रहरी उपरीक्षक महर्जनका अनुसार कान्छीले अस्वभाविक व्यवहार गर्दै थिइन्। जसकारण प्रहरीले उनी माथि नै शं’का गर्ने आधार बनेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उनको घरको खा’नत लासी गर्न थालेको थियो।
खा’नतलासी गरेपछि माथिल्लो तल्लाको पूजा कोठाबाट हराएका सामान ब’रामद गरेको हो। पूजाकोठामा रहेको स्टिलको दराजभित्र लु’काएर राखेको अवस्थामा फेला पारेको हो। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई प’क्रा उ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। नाटक गर्नुको कारण आफ्ना श्रीमान सानु कान्छासँग बिग्रिएको स’म्बन्धका कारण भएको बयान दिएकी छिन्।
Previous: चीनले भारततर्फ संकेत गर्दै भन्यो – चीन र नेपालको सम्बन्धले तेस्रो पक्षलाई असर गर्दैन
Next: पार्टी फोडिदिन्छु, संसद बिघटन गरिदिन्छु, इमर्जेन्सी लगाइदिन्छु भनेर कोही तर्सिनेवाला छैन- नेपाल